İzmir International Fair 88 ayaa loo furay markii saddexaad; "Dunida" Ku Kulmaysa Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmirİzmir International Fair 88 ayaa loo furay markii saddexaad; “Kulankii Bulshooyinka Adduunka ee Izmir
İzmir International Fair 88 ayaa loo furay markii saddexaad; “Kulankii Bulshooyinka Adduunka ee Izmir
07 / 09 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, hawlaha, GUUD, TURKEY
carwada caalamiga ah ee izmir wuxuu furay dunidii dunida
Iyada oo loo marayo hal-ku-dhigga '' Waxaan ku joognaa carwada 'fairzmir', carwada caalamiga ah ee İzmir, oo loo qabtay sannadkan 88, oo albaabbadeeda u furay xaflad aad u wanaagsan. Munaasabadda, oo ay soo agaasimeen Duqa Magaalada Izmir Metropolitan Tunç Soyer, waxaa ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Xisbiga Jamhuuriga Kemal Kılıçdaroğlu, Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu iyo ka qeybgal heer sare ah oo ka yimid dalal badan.
88. Bandhigga Caalamiga ee İzmir (İEF) ayaa lagu furay xaflad ka dhacday Kültürpark Atatürk Open Air Theater. 15 Furitaanka carwada ayaa socon doona ilaa Sebtember, sidoo kale İzmir Duqa magaalada Tunç Soyer, Madaxweynaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu, Wasiir ku xigeenka Ganacsiga ee Jamhuuriyadda Shiinaha Li Chenggang, Ganacsiga Jamhuuriyadda Shiinaha ee Ganacsiga Caalamiga ah ee Shiinaha. Zhang Shenfeng gudoomiye ku xigeenka golaha taakuleynta, kuxigeenka wakiilka safaarada India Vanaja K. Thekkat, gudoomiyaha Izmir Erol Ayyildiz, gudoomiyaha Kahramanmaras Vahdettin Ozkan, Duqa Magaalada caasimada Izmir Aziz Kocaoglu, xildhibaano, badhasaabyo iyo marti sharaf badan ayaa soo xaadiray.
Dimuqraadiyadda iyo sharciga in lagu guuleysto
Kemal Kılıçdaroğlu, Gudoomiyaha Xisbiga Jamhuuriga oo ka hadlayey xafladda, ayaa hoosta ka xariiqay in Bandhigga Izmir, oo soo bandhigay wax soo saarka gudaha xilliyadii ugu horreeyay, in markii dambe loo furey adduunka wuxuuna u mahadceliyay hay'adaha iyo ururada ka qeyb qaatay maalmahan. Isaga oo tixraacaya xaalada dhaqaale ee wadanka inta lagu gudajiray aasaaska Jamhuuriyadda, Kılıçdaroğlu wuxuu yiri: ız Awowayaasheen waxay si aad ah uga shaqeeyeen hormarinta dalka. Shirweynaha Dhaqaalaha ee İzmir waxaa lagu qabtay 1923. Go'aanka lagu asaasay warshadaha difaaca ee Kırıkkale ayaa la qaatay lana sameeyay. In 1925 ee Jamhuuriyadda Turkiga in ay qabsadaan seegay Revolution Warshadaha ee aasaaskii warshad dayuuradaha ee Kayseri dhigay. 1934, diyaaradda waxaa laga soo saaray Kayseri waxayna ku degtay Ankara. In ka badan dayuuradaha 100 ayaa la soo saaray oo la dhoofiyey ilaa warshadii duulista Eskişehir. Submarine ayaa la sameeyay. Si loo gaaro wadadii Mustafa Kemal Ataturk ee Turkey waa meel ay ku qabsadaan ilbaxnimada casriga ah, waana inaan ka adkaanno. Tani waxay u baahan tahay dimoqraadiyad iyo ku dhaqanka sharciga marka hore. Waa inaan sameyneynaa dadaal kasta oo loogu talagalay jaamacadaha si loo soo saaro aqoonta iyadoo la soo saarayo warshadaha, dhaqanka, farshaxanka, sayniska. Waxaan u baahanahay inaan dhisno dowlad bulsho oo xoog leh. Waa waddan aan cidina ka tegin oo furan, dakhliga dadka soo galaana uu sarreeyo. Tan ugu muhiimsanna, in la sameeyo isbeddelladaan mid waara. Adduunku si joogto ah ayuu u kobcayaa; Waxaa jira horumar xagga sayniska iyo farsamada. Turkey waxaa waajib ku ah in ay qabsadaan horumar iyo gacan ka dhaqan dunida. Ma qaban karnaa? Waan hubnaa waan awoodnaa. Izmir waa mid ka mid ah magaalada ugu Turkey ee casriga ah. Anatolia waxay ka kooban tahay juqraafiigii hore ee taariikhda adduunka. By ixtiraamka ra'yiga kala duwan oo ku saabsan juqraafi this qadiimiga ah waxaan u leeyihiin in ay wada dhisato Turkey ah oo qurux badan ".
88 waxaan waligeen joognaa sanado
Khudbadiisa furitaanka, Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda taariikheed ee Fairzmir International Fair. Soyer wuxuu sheegay in carwadan lagu aasaasay Golaha Dhaqaalaha ee 1923 isla markaana ay martigelisay marti sharaf ka kala timid meelo kala duwan oo dunida ah sida Bandhigga 1927 ee Sebtember 9. dadka dalka, Turkiga halkaas oo aanu ku jiraan xaqiiqda mar walba ha 88 sano inaan halkaan u joogno. Waxaan İzmir'd. Waxaan joognaa carwada ”.
Madaxweynaha Soyer, Izmir International Fair waa barta kulanka ee muhiim ah Turkiga, kuwaas oo soo bandhigay aadanaha la tabo cusub oo waqti gaar ah ee xagga siyaasadda adduunka ah, ayaa yiri: "Caalamku na waa, Turkey waa sannadood 88 arki doonaa ka furmo suuqa this. Dhirtii hore ee Kültürpark, magnolias, geedo timireed iyo dariiqyo fudud oo muuqaal ah, maahan oo keliya dadka reer Izmir, xuska wadan dhan. Isaga ayaa la keenaya adduunka. ”
Izmir waa magaalada xorriyadda
dareenka Turkey ee ma aha kadis ah in dhalashada labaad ee Fair Tunç Izmir Caalamiga ah Soyer erayada uu hadalkiisa raaciyay: "Izmir, muddo dheer ka hor abuuritaanka bandhig this, Asia ayaa u soo muuqday a Magaalooyinka waaweyn oo Anatolia ku xiran yahay in dunida. Waa magaalo dekedeed oo lagu tilmaamaa inay tahay caasimada Aasiyada Yar ilaa taariikhda oo dhan. Qodobka ugu horeeya meesha Galbeedka taabto Bariga waa daaqada ugu horeysa oo ay Bari aragto reer Galbeedka. Magaaladan waa deked adduunyo, waa xarun ganacsi oo isku xirta dhaqammo kala duwan iyo dad, iyagoo garaacaya wadnaha u dhexeeya Aasiya iyo Badda Dhexe. Taasi waa sababta Bandhigga Caalamiga ee İzmir, oo taariikh u leh boqol ku dhawaad; Waxay ahayd xusuus lagu xasuusto shaqsiyaadka iyo xusuusta bulshada, dhaqanka iyo farshaxanka la soo saaray, xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayaa la soo saaray, İzmir iyo waddankeenna waxay la kulmeen qiyam caalami ah. Izmir waa magaalo xorriyadda. Dhanka kale, haweeneyda 'Amazon' waa kacdoon ka dhan ah cadaalad darrada, dhanka kale waa kulan dad ay ku wada noolyihiin dhammaan fikradaha oo dhan iyagoo aan is dhaawacin midba midka kale. Sidaa darteed, mid ka mid ah iska caabbinta ugu weyn Anatolia, Dagaalkii Madax-bannaanida, ayaa halkan ka bilaabay. Isla sababtan awgeed, dhaqanka dimoqraadiyadda wuxuu adduunka ugu faafay halkan, oo mid ka mid ah uu dhowr boqol oo mitir u jiro, dhismayaashii baarlamaankii ugu da'da weynaa ee halkan laga dhisay halkan. Inta lagu gudajiro taariikhda; Ku dhawaad ​​wax walbana way isbedeleen, laakiin ruuxii Izmir, cadaaladdu waxay midaysaa qof walba, isu keenidda awoodda weligeed isma beddelin. Xitaa kordhay. Maanta, fiidkan aadka u gaarka ah ayaa mar labaad xiri doona awoodda mideynta Izmir iyo Carwada. ”
Laba gudoomiye waax kasto waxay noqon doonaan hormuud
Ekrem İmamoğlu, oo ka qeybgalay munaasabaddii furitaanka carwadda oo ay Istanbul marti u ahayd sharafta, ayaa sheegay in tallaabada warshadeed ee ay sameysay jamhuuriyadda gudaheeda suurtagalnimada ay ku bilaabatay Golaha Dhaqaalaha Izmir ayna horumarisay IEF. Xitaa dalka aduunka ugu awooda badan ee sannadihii la soo dhaafay, isagoo leh İmamoğlu kacday ruxruxo EXPO, "Our Turkey, Izmir 88 sano ka hor by dhacdo sida, sida shaqada badan waa dhibcood bilaabo muhiim ah ayaa muujisay in ay dunida u saxiixay. Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha ee ganacsiga, marwalba waxaan ku nuuxnuuxsaday in 82 milyan midba midka kale uu isku duubnaado. IEF waxay qabanqaabinaysay isku duubnaanta iyo kulankan magaalada İzmir muddo 88 sano ah. Muwaadiniinta ka kala yimid daafaha dalka ayaa isu yimaada. IEF waxay qaadaysaa tillaabooyin waaweyn oo caalami ah waxayna qabataa shaqooyin muhiim ah isu keenista ummadaha. Ekrem İmamoğlu wuxuu cadeeyay inay kaqeybgaleen Bandhigga Caalamiga ah ee 'mzmir International' markii ugu horeysay "Waxaan rabaa inaan halkaan kaga dhawaaqo inaan anagu noqon doonno hogamiyayaal goob walba leh anagoo isku keenaya isku xirnaanshaha magaca magaalada qadiimiga ah ee identitystanbul iyo İzmir dhiirigelinta iyo noqoshada hormuudka kaqeybgal dhul kasto.
Wasiir Pekcan: Waxaan u wareejin doonnaa dhaxalka IEF mustaqbalka
ganacsiga Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan Turkey ee xnumx'inc sheegaya in ay qaban xafladii furitaanka bandhiga ah "IEF siinayaa muhiimadda ugu weyn ee dhaxalka, waxaan isku dayaynaa inaan wareejiyo dhaxal ahaan this jiilka mustaqbalka," ayuu yiri. Wasiir Pekcan wuxuu carrabka ku adkeeyay inay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu wanaajinayo xiriirka ay la leeyihiin waddanka ay wada shaqeeyaan ee Shiinaha wuxuuna u mahadceliyay dhammaan waddammada iyo magaalooyinka ka qeyb qaadanaya carwada.
Guddoomiye Ayyıldız: Cadaaladdu waxay xoojineysaa xiriirka saaxiibtinimo
Guddoomiyaha gobolka İzmir Erol Ayyıldız wuxuu khudbadiisa ku sheegay inay la kulmeen xamaasadda furitaanka IEF, oo ah mid ka mid ah dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah ee horumarka İzmir horumarka dhaqan-dhaqaale oo lagu aqoonsaday magaalada, adduunka oo loogu talagalay 88 markii ugu horreysay,, xoojinta. ”
Vahdettin Özkan, gudoomiyaha gobolka Kahramanmaraş, oo ka mid ah gobollada sharafta la siiyay ee carwadan, ayaa khudbaddiisa ku adkeeyay in thatzmir International Fair uu u soo baxay inuu yahay hay'adda ugu weyn ee dhiirrigelinta dalkeenna iyada oo ka qayb galayaasheeda caalamiga ah iyo jadwalka munaasabadda hodanka ah. Özkan wuxuu sheegay inuu ku hanweyn yahay inuu yahay gudoomiyaha magaalada ee hay'ad sidan oo kale ah lagu qabtay heer caalami wuxuuna yiri: “İzmir Fair wuxuu bixiyaa fursad aad u muhiim ah oo lagu soo bandhigi karo magaaladeena İzmir iyo adduunka iyo kordhinta shuruudaha iskaashiga dhaqaalaha. Bandhigga Izmir Fair wuxuu noqon doonaa tallaabada ugu horreysa ee olole dhiirrigelin oo kordhin doonta wacyiga iyo qiimaha astaanta magaaladeena oo u soo bandhigi doonta magacyadooda hadda Izmir iyo adduunka.
Wasiir Ku-xigeenka Ganacsiga dhulweynaha Shiinaha Li Chenggang ayaa sidoo kale sheegay in IEF ka ciyaartaa door muhiim ah in furitaanka Turkey ee dunida, "dhinaca Chinese mar walba IEF ee ka qaybgale. Sannadkan waxaan la nimid sidii iskaashato waddan oo leh shaqaale muhiim ah iyo dad ganacsato ah. Waxaan aaminsanahay in munaasabaddan, isku soo dhawaanshaha iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ay calaamad u noqon doonaan xiriirka dhaqaale iyo ganacsi. ”
Isagoo ka hadlayay xafladda furitaanka, ku xigeenka Madaxa Ergada Safaarada India Vanaja Thekkat, oo sheegaya in xidhiidhka dhaqaale xoog leh Turkey taariikhda Hindiya ayaa, 88 xiriir this. Wuxuu sheegay inay rabaan inay horay ugu socdaan barnaamijka caalamiga ah ee 'mzmir International Fair'. Thekkat wuxuu xusay suuragalnimada maalgashi ee dalkiisa wuxuuna sharxay faa iidada ay leedahay maalgashiga shisheeye wuxuuna sheegay in iskaashiga u dhexeeya shirkadaha Hindiya iyo shirkadaha Turkiga ee ka qeyb galaya carwada ay xoojin doonaan xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal.
Daneyn ballaaran ayaa ka timid dadka reer Izmir
Khudbadihii kadib, furitaankii carwadii carwooyinka ayaa la jaray oo martidii carwada ayaa si wada jir ah u furey istaagida magaalada Istanbul, martida sharafta leh. Kılıçdaroğlu, Soyer iyo Imamoglu intii lagu guda jiray dalxiiska muwaaddiniintu waxay la kulmeen daneyn iyo bandhigyo jacayl.
Jadwal Taageero Dheeraad ah oo loogu talagalay Fair International Fair
BozankayaBasaska Laydhka ee Carwada Caalamiga ah ee Izmir
Tirinta ayaa ka bilaabatay İzmir International Fair
Kemeraltı wuxuu booqday Izmir International Fair
Bandhigga Caalamiga ah ee İzmir
Bandhigga Caalamiga ah ee Izmir ayaa la furay